Maxaa dhacaya haddii aanan bixin cashuurta Guriga (Hanti ma guurtada ah) | LawHelp Minnesota
Maxaa dhacaya haddii aanan bixin cashuurta Guriga (Hanti ma guurtada ah)
Taxadar la imow (feejignow)!
Haddii aad dib ula dhacdid bixinta cashuurta guriga, waxaad waayi kartaa guriga iyo raasumaalka kaaga jira guriga! Tan waxaa loo yaqaan Guri ku waayid Cashuur bixin la’aan. taxadar gaar ah sii dhamaan ogaysiinta lagu siiyo ee ka yimaada magaaladaada, xaafadaada, ama degmadaada ee ku taal gobolka Minnesota. Waxaa ku jira waqti adag ee la xadiday!
Marka aan qofku bixin cashuurtii guriga, guriga wuxuu u wareegayaa gobolka. Laakiin habraaca aad ku waayayso waxaa maamula degmada ee gurigu ku yaal. Waaxda degmada u qaabilsan cashuuraha guryaha ayaa ah meesha ugu weyn ee aad la xiriirayso kana helaysid macluumaad.
“La Daahidda” vs ‘Dib U Dhac” Cashuurta Guriga
Hadii aadan bixin cashuurta guriga bilaha Maajo iyo Ocktoobar, waxaa loo yaqaan la daahid waxaana lagu darayaa kharjka la daahidda bil kasta.
Haddi aadan bixin cashuurta guriga ee sannadka oo dhan, Gobolka Minnesota wuxuu u yaqaan cashuurtaa “ Dib u Dhac weyn” maalinta ugu horeysa ee sannadka ku xiga.
Tusaale la isticmaalayo sannadkii hore:
Barka hore ee sannadka 2019 bixinta cashuurtu waxay soo gelaysaa bisha Maajo 15, 2019. Waxaad ku bixin kartaa waqtigeeda.
Barka dambe wuxuu soo gelayaa Oktoobar 15, 2019. Weli ma bixin. Hadda barka labaad ee 2019 waa cashuurta gurigu waa “daahday”. Ciqaab la daahid ayaa lagu darayaa kharajka bisha Oktoobar 16, ciqaabtuna waxay kordhaysaa bil walba haddii aadan bixin.
Waxaad haysataa ilaa Diseembar 31, 2019, in aad ku bixiso barka labaad ee cashuurta guriga oo ay ku jirto kharajkii la daahidda.
Maalinta shaqo ee ugu horeysa 2020, haddii aadan weli bixin wax cashuur ah ee lagugu lahaa, cashuurta gurigaaagu waxay noqotay “Dib u Dhac weyn”.
Waxaa igu yimid dib u dhac weyn. Maxaa ku xiga ee dhici kara?
Mar haddii uu kugu yimaado “ Dib u Dhac Weyn” ee bixinta cashuurta gurigaaga, waxaa bilaabanaya hab raaca “ Guri ku waayid Cashuur bixin la’aan”. Waxaad haysataa waqti aad ku xaliso waxa jira, laakiin haddi aadan bilaabin, waxaad ku dambaynaysaa in gobolku gurigaaga geliyo “ Guri ku Waayid Cashuur la’aan”. Haddii habraacaas uu dhamaado, guriga waxaa lagu iibin karaa xaraash.
Marka hore, waxaad helaysaa Ogaysiin Dib u Dhac Weyn iyo warqad Dib u Dhac cashuurta guriga, bisha Maarso 20 ee sannadka loo aqoonsaday in uu dhacay “ Dib u Dhac Weyn” . haddii ay jiraan qayba kale ee daneynaya, sida qof ama shirkad guriga ku leh amaah, iyaguna wey helayaan ogaysiinta. Ogaysiinta iyo warqaddu waxay ku kala yaalaan labada dhinac ee isla hal warqad. Ogaysiintu waxay sheegaysaa waqtiga uu dhacay la wareegidda guriga iyo hab raaca waqtiyada ugu muhiimsan. Warqaddu waxay kuu sheegaysaa in aad si taxadar leh u akhriso, waxay kaloo cadaynaysaa inta lagu leeyahay, waxay xisaabinaysaa dulsaarka, iyo timaan bixinta sida loo bixinayo.
Haddii aadan ku raacsanayn sida cashuurta loo xisaabiyay ama loo qiyaasay ogaysiinta dhexdeeda, waxaad qorran kartaa diidmo waqtiga kama dambaysta ah ee ku qoran ogaysiinta. Ogaysiintu waxay kuu sheegaysaa sidii aad u dacwoon lahayd, FEEJIGNOW! Ogaysiinta degmooyinka qaarkood waxaa qora kombiyuutar 40 sanno jira, ayna adag tahay in la akhriyo. Akhri wax walba si taxadar leh oo wac xafiiska degmada waaxda u qaabilsan cashuuraha guryaha isla markiiba weydii hadii aad su’aal ka qabtid.
Haddii aadan waxba diidanayn, ama ay maxkamadi si lid ku ah xukuntay diidmadaada, maxkamadu waxay gelinaysaa Xukun Makamadeed ee canshuurta. Taas micneheedu waxa weeye guriga wax baa lagu leeyahay oo ah tirada cashuurta Dib u dhac ku timid.
Marka xukunka la geliyo, gurigu wuxuu gelayaa naadin qiimo lagu tartamo Isniinta labaad ee bisha Maajo. Taas micneheedu waxa weeye gurigu weli addiga ay ku qoran yahay, laakiin gobolka ayaa wax ku leh wixii ka soo baxa. Tani waa bilowga xiliga dib u helida. Cidda yeelan doonta guriga waxay ku xirrantahay xilliga dib helidda.
Xilliga Dib u helidda
Xilliga dib u helidda wuxuu dhamaanayaa 3 sanno ka dib marka gobolku naadiyo qiimaha lagu tartamayo. Inta xilligan lagu jiro, adiga ama cid kasta oo si sharci ah wax ugu sheeganaysa, waxay xaq u leeyihiin dib u helidda, ama dib way u heli karaan. Si aad dib ugu heshid waa in aad bixisaa cashuurtii dib u dhacday, oo ay ku jirto kharashka iyo dulsaarka.
Haddii aad bixiso wixii lagu lahaa, xukunkii lidiga kugu ahaa waa la tirtirayaa, guriguna ma ahaanayo wax Dib U Dhac Weyn ee cashuur ah ku yimid. Wixii gobolku ka rabay iyo cashuurtiiba waa laga masaxayaa.
Haddii ay da’daadu tahay 65 sano, waxaad ka soo bixi kartaa shuruudaha barnaamijka dadka waaweyn guryahooda cashuurta laga daayo. Tani waxay kaa caawimi kartaa in aad daaweyso Dib u la dhadaca canshuurta, oo aad awoodi kartid oo cashuurtii gurigaaga ay hore u socoto. Macluumaad dheeraad ah tag https://www.revenue.state.mn.us/property-tax-deferral-senior-citizens ama la xiriir xafiiska cashuuraha degmadaada. Waxaa kaloo jira barnaamijyo ciidamada da’da ah iyo dadka naafada ah.
Haddii ay cid daneyneyso in ay bixo, sida bixiyaha amaahda guriga, uu bixiyo cashuurtii dib u dhacday, oo uu guriga dib u soo ceshado, waxa uu bixiyay oo dhan iyo dul saarka ku biiray ee qaanta waxaa lagu darayaa xisaabta uu guriga ku leeyahay si waafaqsan shuruudihii heshiiska guriga. FEEJIGNOW (TAXADAR)! Haddii shirkadda amaahda guriga ku siisay ay bixiso cashuurta, waxaa suurta gal ah in ay bilaabaan la wareegid guri, iyadoo ay ku xirantay heshiiska amaahda guriga. Tanni waxay si gaara u jirtaa hadii aad leedahay dib u celin amaah guri.
Inta lagu jiro xiliga dib u helida, waxaad geli kartaa “Qirasho Xukun." Qirasho xukun wuxuu u dhaqmaa si la mid ah qorshaha bixinta amaahda, haddii aadan bixin Karin hal mar dhamaan inta cashuur ah ee dib loola dhacay. Inta badan guryaha la deggan yahay waxay qaadan karaan 10 sano, laakiin ka hubi degmadaada.
Sidee Qirasho Xukun u shaqeeyaa?
Waxaad geleysaa heshiis aad ku bixinayso cashuurtii lagugu lahaa ee aad dib ula dhacday iyo kharajkii yo dulsaarka in aad si is le’eg ku bixinaysid sannadkiiba. Inta badan waxaad ku bixinaysaa 10 sano. Waa in aad sidoo kale bixisaa cashuurta sannadka socda.
Waa in aad bixisaa xisaabtii ugu horaysay isla markiiba si ay kuugu bilaabato qirashada xukunka. Taas waxaa loo qaadanayaa hor u marin. Qorshe 10 sano, horumarintu waa 10% intii cahuurta dib u dhacday, oo ay ku jirto kharajka iyo dulsarka.
Bixinta ku xigta waxay soo gelaysaa marka hal sano ka soo wareegto markii aad qirashada xukunka gashay. Haddii aadan ku bixin taariikhdaas, degmadu waxay ku saari kartaa kharash dib u dhac. Waa in aad bixisaa ka hor 31 Diseembar ee sannadka. Bixin kasta ee ka dambaysa waa in ay dhacdaa 31 Diseembar sannad walba.
Hadii aad seegto bixinta ama aad ogolaato in cashuurta sannadka ay noqoto mid Dib u Dhacda, Qirashadii Xukunku waa laga noqonayaa, xukunkii cashuurtuna dib ayuu u soo noqonayaa.
Haddii Qirashada Xukunk looga bixin la’aan, waxaad geli kartaa mid kale, Laakiin waxaad samayn kartaa 2 Qirasho keliya.
Maxaa dhici kara haddii aanan samayn Qirasho Xukun si aan u helo qorshe aan wax ku bixiyo ?
Hadii aadan dib u helid samayn ama aadan ku guulaysan in aad gasho Qirasho Xukun oo leh qorshe wax bixin, Xilliga Dib u Helida wuxuu dhamaadaa 3 sano, ka dib marka uu gobolku naadiyo qiimaha guriga lagu iibinayo. Adiga iyo cidda kale ee xiisaynaysa waxay helayaan hal ogaysiin, oo boostada loogu keenay guriga si uu u saxiixo: Ogaysiin Dhicitaanka Dib U Hellidda. Dadka guryaha leh badidood way helaan ogaysiintaan, bisha Janaayo ee sanadka uu dhamaanayo xilliga Dib u Hellida.
Hadii aadan bixin cashuurtii guriga ee 2016.
Cashuurtu waxay noqonaysaa “ Dib U Dhac Weyn”, xukun ayaa la diiwwan gelinayaa, gurigiina gobolka ayaa naado gadid la geliyay sanadkii 2017. Tani waa marka ay bilaabanayso 3-sano ee “Xilliga Dib u Hellida”.
Hadii aadan Dib u Hellid samayn, ama aadan haysan Qirasho Xukun ee aan weli dhicin, waxaad helaysaa ogaysiinta Dhicitaanka Dib u Hellida bisha Janaayo 2020. Ogaysiintaani waxay kaaga digaysaa in xilliga Dib u hellida 3da sanno ee ay ku egtahay guriga 2020.
Waxaad kaloo gadi kartaa gurigaaga ka hor xilliga dib u helidda. Waa in aad degmada siisaa cashuurtii guriga ee dib u dhacday, waxa ka soo baxa gadida guriga, laakiin waxaad la hari kartaa wixii raasumaal ah ee kaaga hara. Gaddida guriga si aad u badbaadiso raasumaalka waxay in badan ka wanaagsan tahay in guriga loo gacan geliyo gobolka.
Ogaysiinta dib u helidda waxay kaloo kuu sheegaysaa in guriga ay degmadu la wareegayso 60 maalmood ee ugu horeeya ka dib marka laguu soo diro Ogaysiinta, ama Isniinta ugu horeysa ee bisha Maajo, hadba kii dambeeya.
Tariikhda saxda ah ee la wareegidda guriga waxay ku xirantahay degma kasta jadwalkeeda. Waa in aad macluumaad dheeri ah kala xiriirtaa waaxda degmada u qaabilsan cashuuraha.
Marka uu dhaco la wareegidda, guriga waxaa yeelanaya gobolka, laakiin degmada ayaa goosneysa sida laga yeelayo guriga.
Laba ayey mid noqon kartaa:
(1) Xaraash guriga lagu gado ama
(2) In Guriga laga dhigo hanti ay daweynuhu isticmaalaan
Ma jiraan wax aan samayn karo si aan guriga u sii lahaado ka dib marka lala wareegay?
Mar haddii guriga lala wareego, waxaa kuu furan 2 siyood oo aad guriga dib ugu yeelan karto oo aad ku badbaadin karto wixii raasumaal ah ee guriga kaaga jira:
Ka gadasho guriga rugta lagu xaraashayo, ama
U qoro codsi degmada in aad dib u soo gadato guriga.
Ka iibsiga rugta xaraasha: qof kasta qiimo waa ku beecin karaa guri loo xaraashayo la wareegid cashuur bixin la’aan, aan ka hayn shaqaalah iyo saraakiil gaar ah ee degmada ka socda. Qiimo waad ku beecin kartaa guriga, laakiin kuma gadan kartid wax ka yar cashuurtii dib u dhacday, ganaaxii, dulsaarkii iyo kharashyadii kale qiime ka yar.
Arjiga dib u iibsashada: Waqti kasta oo ka horeeya inta aan degmadu gadin ama u soo bandhigin, waxaad arji u qorran kartaa gudiga degmada in aad dib u iibsato guriga. Sax ma aha in aad dib u iibsato. Waxay ku xirantahay gudigga degmada. Guud ahaan, waa in aad muujisaa in dhib adag oo badan oo ku haysatay in ay sababa u noqotay in aad bixin weydo cashuurtii guriga, ama in aad dib u iibsato ay ku jirto danta dadweynaha.
Dib u gadashadu badanaaba waa qorshe aad 10 ku bixinayso, sida qorshaha 10ka sano ee qirashada xunkunka (kor fiiri). Laakiin ka hubi degmada sababta oo ah inta sano uu yahay qorshahaasi waxay ku xirantahay waxa lagu qeexay guriga. Tusaale, guri degaan ah iyo guri ganacsi ah ama guri leh beer iyo guri aan beer lahayn. Waa in aad samaysaa caymiska guriga haddii aad rabto in aad yeelato.
Fiiro Gaar Ah: Marka guriga la xaraasho, ma codsan karto in aad dib u gadatid.
Maxaa dhacaya haddi aan guriga iska joogo?
Hadii aad guriga iska joogtid, degmadu waxay kuula imanaysaa ogaysiin in guriga lagaa saaro. Tan waa talaabadii ugu dambaysay. Degmadu waxay kaala shaqaynaysaa in aad guriga isga baxdid ka hor inta aan amar ka bixid ah laguu keenin. In guri lagaa ijaaro way adagtahay adigoo Khasab guri lagaaga soo saaray. Waxaa wanaagsan in aad degmada la shaqayso in aan sidaasi dhicin.
Haddii aad guriga dhaxal u heshay
Dadka bixinta cashuurta guryaha dib u dhiga illaa lala wareego inta badan way dhaxleen guriga. Mararka qaarkood cidda ku qorran guriga waxay dhib u ku keentaa in guriga dib u soo gataan. Haddii aad guriga dhaxashay, laakiin aan la fulin sidii loo dhaxlay oo aan la bixin cashuurihii ku taagnaa, magaciina aan laga wareejin, waa in intaas oo dhan aad samaysaa si guriga magacaaga lagu soo wareejiyo. Degmadu waa kaala shaqaynaysa in aad dib uga dartid guriga, inta aad sugayso dacwada dhamaystirka arrimaha guriga la dhaxlay. Kala hadal arrintaa xafiiska degmada u qaabilsan cashuuraha sida ugu dhaqsa badan.
Ka digtoonow khiyaamo!
Dib ula dhicid bixinta cashuurta, iyo jadwalka la wareegidda guryaha waa macluumaad dadweynuhu ogaadaan! Kuwa khayaamada saMaajoa way heli karaan macluumaadkan waana kula soo xiriiri karaan iyagoo kuu sheegaya in ay ku caawimaan. Waxaa laga yaabaa in ay yiraahdaan waxaan kaa bixinaynaa cashuurta haddii aad saxiixdo in ay guriga wax ku sheeganayaan, ama in guriga magacooda lagu qoro. Tani waxay siinaysaa in ay go’aanka guriga wax ku yeeshaan ama ay lacag ka helaan. Tan waxaa loo yaqaan “ Hanti boob”. Waxba ha saxiixin illaa aad marka hore la hadasho gar yaqaan!
Xagee ayaan gargaar ka heli karaa?
Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, wac ama u soo arag waaxda cashuuraha ee degmada. Inta badan degmadu ma rabto in ay qaadato gurigaaga, laakiin waxay raacaysaa sharciga gobolka. Degmadu waxy ku siinaysaa macluumaadka aad u baahan tahay io dhan.
Degmooyink waaweyn waxay leeyihiin kayd xog iyo shaqaale caawima dadka guryaha leh, iyo kuwii hore u lahaaba si ay wax uga ogaadaan Qirashada Xukunka ama hab raaca dib u gadashada.
Waxaad kaloo wacdaa xafiiska gargaare sharci yaqaan.
Waaxda Maaliyadda Minnesota waxaa laga heli karaa macluumaad ku saabsan cashuurta guryaha iyo la wareegidda fiir halkaan https://www.revenue.state.mn.us/delinquent-real-property-tax-and-tax-forfeiture-manual, oo ay ku jirto “ Diiwaanka cashuurta Dib u dhac ku yimid, iyo cashuurta la wareegidda” ama “Buugga Cas”. Kan waa kayd xog dhamaystiran oo sharaxaysa hab raac la wareegidda guriga.